China Flange nati vagadziri uye vatengesi | Jiuhe
Iyi mhando yeHexagon Flange Nut inonzi zvakare pad pad, ruva - mazino nzungu, flange nati uye zvichingodaro. Iyo inowanzoshandiswa kubatanidza pombi kana zvezvimedu zvebasa zvinoda kuwedzera iyo nut yekusangana. Iyo inogadzirwa neyemuvhutu zvinhu zvine basa rakanaka. Iyo inokurumidza ine tambo dzemukati uye yakashandiswa pamwe chete nemabhandi, uye zvakare inogona kushandiswa sechikamu chechishandiso chinoshandiswa mukubatana nehurefu hwekufambisa mafambiro kana simba.
Iyi mhando yeHexagon Flange Nut inonzi zvakare pad pad, ruva - mazino nzungu, flange nati uye zvichingodaro. Iyo inowanzoshandiswa kubatanidza pombi kana zvezvimedu zvebasa zvinoda kuwedzera iyo nut yekusangana. Iyo inogadzirwa neyemuvhutu zvinhu zvine basa rakanaka. Iyo inokurumidza ine tambo dzemukati uye yakashandiswa pamwe chete nemabhandi, uye zvakare inogona kushandiswa sechikamu chechishandiso chinoshandiswa mukubatana nehurefu hwekufambisa mafambiro kana simba. Uye zvakare, iyo Hexagon Flange Nut ine yakanakisa mabhenefiti emhando yepamusoro, yehurefu hwesevese basa, kukwirira kwakanyanya, kupfeka kupesana, kutu kupokana, kompakiti dhizaini, dhizaini dhizaini, mutengo wakaderera pamwe nemari yepamusoro inoshanda. Inogonawo kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi vakasiyana. Chii zvakare, chiri saizi yakaenzana uye tambo saizi seyakazara hexagon nati, asi ichienzaniswa neyakawanda hexagon nati, iri chimedu-chimwe gasket uye nati, uye ine anti-inotsvedza mazino maitiro pasi, ayo anowedzera nzvimbo yekusangana yeiyo nati uye chidimbu chebasa. Naizvozvo, kunetsana kwakasimba kupfuura iko kusanganisa neyakajairika nati uye washer. Iyo Hexagon Flange Nut inonyanya kufarirwa nevatengi vedu pasi rese.
Hexagon flange nati: Ruzivo rwekutanga rweFlange nati ndeinotevera: flange nati ine iron, zvakare ine isimbi yesimbi.But iron inonyanya kushandiswa.Asi zvakare zvinoenderana nemutengi inoda color plating kurapwa.General electroplating kurapwa ine kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye isina - kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.Electroplating ine kuchengetedza zvakatipoteredza ruvara zinc, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nickel, kuchengetedzwa kwezvakatipotera bluu zinc, kuchengetedzwa kwezvakadzi nharaunda zinc uye zvichingodaro, zvakare kune yakajairwa elektroplating, chena zinc, ruvara zinc, nhema zinc, chena nickel uye zvichingodaro.
Thread mamiriro (d) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Gomba Tambo yeCoarse 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2,5
Mucheka wakanaka1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
c mashoma 1 1.1 1,2 1.5 1.8 2.1 2.4 3
dc kukwana 11.8 14.2 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8
e mashoma 8.79 11.05 14.38 16.64 20.03 23.36 26.75 32.95
k kukwana 5 6 8 10 12 14 16 20
mashoma 4.7 5.7 7.6 9.6 11.6 13.3 15.3 18.9
s kukwana 8 10 13 15 18 21 24 30
mashoma 7.78 9.78 12.73 14.73 17.73 20.67 23,67 29.67
Chinyorwa Carbon Simbi
Zvepamusoro Zinc ichena chena
Saizi M4-M24 & Bvuma Yakagadzirirwa
1.OEM, dhizaini yemutengi, zvinyorwa zvevatengi zvakapihwa.
2.Exclusive uye yakasarudzika mhinduro inogona kupihwa kumutengi vedu nevatinodzidziswa nehunyanzvi mainjiniya nevashandi.
3.Tinogona kupa yemahara samples cheki yako.
Yepfuura: Hex nati
Inotevera: Square nati